Snn Nepal मृत्यु भएकाहरुको उपचार हैन शव ब्यबस्थापन गर्नुपर्छ: गुरु भट्टराई – Snn Nepal
मृत्यु भएकाहरुको उपचार हैन शव ब्यबस्थापन गर्नुपर्छ: गुरु भट्टराई
काठमाडौ । नेकपा एमाले निकट नेता तथा नेपाल रेल्वेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले मृत्यु भएका ब्यक्तिको शब ब्यबस्थापन राम्ररि गरिनु पर्ने बताउनु भएको छ । बन तथा बाताबरण मन्त्री प्रेम कुमार आलेले मृत्यु भएका शब जलाउन दाउराको कमि नहोस भन्ने अभिव्यक्ति दिए पछि सधै नराम्रो मात्र सोचिरहने बिरोधिहरुले बिरोध गर्न थालेका छन ।
प्रेम कुमार आले ले राम्रो कुरा बोल्दा बोल्दै पनि केही अराजक ब्यक्ति र संगठनले बिरोध गरे पछि गुरु भट्टराईले जिउँदै हुदा सम्म उपचारको ब्यब्स्था राम्रो गरिनुपर्ने र मृत्यु भयो भने शबलाई उचित ब्यब्स्थापन गरिनुपर्ने बिचार राख्नु भएको छ । उहाले सामाजिक संजालमा लेख्नु भएको छ :
“बनमन्त्रीले आर्यघाटमा लाश जलाउने दाउरा कमि हुन दिन्नौ भन्नु भो; महान नेपाली जनताले अर्थ लाए – मान्छे जोगाउनु भन्दा जलाउन हतार । #आखिर नेपाली हो नि, मौका पाएपछी गर्छ ।
लाश जलाउने दाउरा नपाएर भारतको गंगा नदीमा हजारौंको लाश यत्रतत्र बगिरहेका छन । कुकुर, गिद्द र स्यालहरुले तानिरहेका छन । लाशको ब्यबस्थापनमा हेलचेक्रयाइ नहोस भन्दा अजासु (अति जान्ने सुन्ने) हुनेहरुको भने कमि छैन । लाश जलाउन समस्या भए यीनै महामानवको अर्को तर्क आउँछ – जीउदोमा त उपचार गरेन, मरेपछी पनि सरकारले सुख दिएन भन्दै ।
मरेकालाइ जलाउने कि उपचारको ब्यबस्था गर्ने महामानव हो? मरेकालाइ जलाउने ब्यबस्था गरौ भन्दा जीउदालाइ उपचार नगरौ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी बाउआमाले कस्तो भाषा सिकाएछन? बनमन्त्रीले काठ दाउराकै कुरा गर्ने हो, हस्पिटल र भेन्टीलेटरको हैन ।”